ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Big Bad Wolf စာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ကို သွားသင့်? မသွားသင့်? – YANGON STYLE
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Big Bad Wolf စာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ကို သွားသင့်? မသွားသင့်?
“သွားရတာ မတန်လိုက်တာ…စိတ်ပျက်စရာကြီး..” လို့ ညီမလေးတစ်ယောက်က ရေရွတ်လာလေရဲ့…၊ Social Media ပေါ်မှာ စိတ်၀င်စားမှု အရမ်းမြင့်တက်နေလို့ လူတိုင်းစိတ်၀င်စားနေကြပေမယ့် အကြိုက်မတွေ့သူတစ်ချို့လည်း ရှိနေပြန်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ စာဂျပိုးဖြစ်အားလျော်စွာ English ဘာသာစကားကိုလည်း အတန်အသင့်နားလည်သူဖြစ်လို့ ဝံပုလွေဆိုးကြီးရဲ့ ပွဲတော်ကို အရောက်သွားဖို့ စိုင်းပြင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ပွဲတော်ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့ အထိ ရန်ကုန်မြို့ သာကေတမြို့နယ်က Myanmar Expo, Fortune Plaza မှာ ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကတော့ မနှစ်ကလို ၂၄ နာရီပတ်လုံး မဟုတ်တော့ဘဲ မနက် ၉ နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီ အထိ ပါဘဲတဲ့။
Big Bad Wolf Book Fairs ဆိုတဲ့ ဒီပွဲလေးဟာ မလေးရှား နိုင်ငံက စဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း နှင့် သီရိလက္ကာ နိုင်ငံ တို့မှာ မကြာခဏ ပြုလုပ်တဲ့ စာအုပ်ပွဲတော် တစ်ခုပါ။ စာအုပ်တွေက BookXcess ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆိုင် နှင့် International Distributors တွေဆီက ပိုနေတဲ့ ရောင်းကုန်တွေကနေ လာတာပါတဲ့။ ပထမဦးဆုံး စကျင်းပခဲ့တာတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပြီး Dataran Hamodal, Petaling Jaya မှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ မနှစ်က ရန်ကုန်မှာ တစ်ကြိမ်၊ မန္တလေးမှာ တစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့တာမို့ အခုတစ်ကြိမ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် တတိယအကြိမ် ပေါ့နော်။
📚 #BBWYangon စာအုပ် ပွဲတော် မှာ ဘယ်လိုစာအုပ်တွေရှိမလဲ??
အဂ်လိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကနေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျှော့ချထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေ တွေ့ရင်တော့ တော်တော်တန်တယ် လို့ ဆိုရမှာပါ။
စာအုပ်အများစုဟာ ၅၅၀၀ကျပ်မှ ၉၀၀၀ကျပ်အထိ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အဆောက်အအုံထဲကို ၀င်၀င်ခြင်းမှာပဲ သောင်းနဲ့ချီတဲ့စာအုပ်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ မူးနေအောင် တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ဘယ်လိုစာအုပ်လိုချင်သလဲဆိုတာကို မှတ်ခဲ့ပါ။
တွေ့မှပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး သွားရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းတွေဟာ လူအရမ်းများတာဖြစ်လို့ အေးဆေး စာအုပ်ရှာဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
Discount ချတဲ့စာအုပ်တွေကို ရောင်းတာဖြစ်လို့ အသစ်ထွက်တဲ့ စာအုပ်တို့၊ အရမ်း နာမည်ကြီး စာအုပ်တွေ အစုံအလင် ရဖို့တော့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရမ်း မျှော်လင့်ချက် မကြီးပါနဲ့လို့…၊ လိုချင်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရှာတတ်ဖို့ပါပဲ။
ကလေးစာအုပ်တွေ အရမ်းများတာကြောင့် မေမေနဲ့ ဖေဖေတို့လာဖို့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
Motivation စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ် ရှာတတ်ရင် ရွှေပါပဲ။
အကယ်၍ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖို့ အားမသန်ဘူးဆိုရင် စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ အရောင်ခြယ်စာအုပ်တွေရောင်းပါတယ်။ အထူကြီးတစ်အုပ်ကို ၃ထောင်ပဲရှိတာဖြစ်လို့ တန်မှတန် ၀ယ်သင့်တဲ့အနေအထားပါပဲ။ လက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတာဖြစ်လို့ မ၀ယ်ဘူးဆိုရင်တောင် စမ်းခဲ့လို့ရပါတယ်၊ စမ်းခွင့်ပေးထားတာတယ်နော်။
ကိုယ် လိုချင်တဲ့ စာအုပ် ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်Customer Service ကောင်တာ မှာ စာအုပ် နာမည် မေးပြီး ဘယ်နေရာမှာ ရှိလောက်လဲ လို့ မေးလို့ ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အကြမ်းစာ Gift ပေးတဲ့ အစီအစဉ်လည်းရှိပါသေးတယ်။ စာအုပ်ပွဲတော် မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို #BBWYGNSNAPSHOTS နှင့် #BBWYANGON2020 ဆိုတဲ့ Hashtag တွေနှင့် Facebook တို့ Instagram တို့မှာ တွဲတင်ပြီး ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၀င်လိုက်ပါ။ အာဝုတို့က နေ့တိုင်း တစ်နေ့ ၁၀ ယောက် winners အနေနှင့် ရွေးတာမို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်ပြီး ဆု အဖြစ် Gift Card လေးတွေ ယူဖို့ မမေ့နှင့်နော်။ ၂သောင်းဖိုး၀ယ်ယူခွင့်ရတဲ့ ကဒ်မို့လို့ ပြိုင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့…၊ .
စာအုပ်တွေအားလုံးတိုင်းလိုလိုကို sample စာအုပ်တွေ ချပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ အဲဒါတွေ ဖတ်ကြည့် ပြီးရင်လည်း နောက်လူတွေ အဆင်ပြေအောင် မူရင်း နေရာမှာဘဲ ပြန်ထားပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
အစားအသောက်အတွက် ကန်တင်းလေးလည်းရှိသလို အပြန်မှာ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းပေးတဲ့ဆိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်။
ကဲ … ဒီလောက်ဆို Big Bad Wolf Book Fairs လေး အကြောင်း သိသင့်သလောက် သိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ သွားသင့်သလား မသွားသင့်သလားဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်